Kana murume asingakude maitiro aanoita | Stylish Men
Alicia tomero | 26/05/2022 18:15 | Kuchengetwa kwega, Vakaroorana uye Bonde
Wanga uchiona kwekanguva here? hukama hwako hausi kushanda nemazvo? Iri kushata uye haugone kuwana zvikonzero? Zvichida mumwe wako haachanzwi zvakafanana uye ndiyo kiyi yekuti mamwe maitiro ave muchetura. Kana murume asingakude anoita sei?
Muzviitiko izvi zvakanakisisa vimba nenjere uye vimba nezviratidzo. Asi zvizhinji zveizvi zviratidzo zvinokurirwa apo gore iroro rokusavimbika rinodzivisa nzira yokuona zviri pachena. Kutanga, tinofanira kusava nokwatakarerekera uye kuzvitarisira zvakanaka, kwete kurega chimwe chinhu chichikukurira tisati taita zvisarudzo zvakasimba.
1 Sei uchinzwa sekuti haakudi?
2 Kana murume asingachakudi anoita sei?
2.1 Haavimbi newe sezvaaiita kare
2.2 Haunzwi zvakanaka paari
2.3 anogara achitsamwiswa
2.4 usambova nenguva yako
2.5 Iwe hausisiri ivo vanokoshesa
2.6 Zvirongwa zveramangwana zviri kupera
Sei uchinzwa sekuti haakudi?
Kana pane uchapupu hwokuti haachakudi, zvingava zviri pachena. Nekudaro, dzimwe nguva isu tinonetseka kuziva kana izvi zviri izvo, kubvira Iwe unogona kunge uri munhu anonyatso ziva uye usingape zviratidzo.
Kazhinji Chinhu chekutanga chinocherechedzwa kusava nehanya, sezvo mashoko iwayo kana zviratidzo zverudo zvakagara zviripo zviri kurasika. Mafungiro ake ane rudo rushoma kana kuti kwatingataura kuti zviito zvake pamusoro porudo zvakatopera simba.
Kana murume asingachakudi anoita sei?
Iwo mameseji anogona kuve mazhinji, chinowanzo mira pachena ndechekuti riini havachakusanganisi muzvisarudzo zvavo zvinokosha zvikuru. Kana pane zvinangwa, vanogara vachibvunzwa nemumwe wavo, kana zvichikosha.
Haavimbi newe sezvaaiita kare
Kusavimbika chimwe chezviratidzo. Kana munhu akatendeseka, anogara aine rudo uye kuvimba kune mumwe munhu, uyezve, hukama hahugone kuchengetwa nekufamba kwenguva kana pasina hukama hwakadaro uye kuchengeteka.
Haunzwi zvakanaka paari
Pane pfungwa dzakawanda dzinobata mubvunzo uyu unofadza. Kana iwe usingachanzwi zvakanaka kana iwe uri padivi pake, zvichava izvozvo haunzwi kunyaradzwa ikoko, sezvo mashoko ako asina kunaka kana kufadza.
Kana asinganakirwe nazvo, iwewo haunakirwe nekushamwaridzana kwake, asi chinhu chimwe chinoitika, hausisiri kunzwa kusununguka semunhu. Chokwadi mashoko auinawo haasisiri akanaka uye hazviiti kuti hukama hugadzirike.
Kana zvirevo zvisina kunaka, zvimwe zvese zvinosanganisira aura ine muchetura. Chokwadi tsananguro dzese hadzina kunaka kumutsa nhaurirano. Kana ari munhamo chete kana ainewe kana edza kutsvaga kurwa kwepfungwa, hachisi chiratidzo chakanaka.
Zvinogona kucherechedzwa kuti nhaurirano hadzina kumbonaka. Zvichida pasati pava nekurukurirano pane imwe, inogona kuva yakapesana. Kana kusisina kurwa kana kukakavara hakupo kunogonawo kuva chiratidzo chakaipa, Sezvo kuti ushamwari hufambire mberi, rudzi rwakati rwokusabvumirana runofanira kuratidzirwa fariro nguva nenguva kuti mumwe munhu akure.
usambova nenguva yako
Chimwe chiratidzo ndechekuti haana nguva yekuva newe. Kana uchichida, kana uchichireva, kana uchida kuita chirongwa uye chikasauya, chinofanana nekusafarira. Chokwadi itai pembedzo ipi neipi kuti murege kuuya kwamuri, sezvo munhu anogara achida kukuona achaita zvese zvaanogona kuti ave padivi pako.
Iwe hausisiri ivo vanokoshesa
zvirokwazvo kare haadi kugara newe senguva dzose. Pane dzimwe nguva zvinoita kuti unzwe wakashata kana ukakumbira imwe nguva pamwe chete. Unotoona sekunge urikupemha.
Kune nzvimbo yakawanda uye yakawanda pakati pekushanya kwega kwegaAnotonyangarika kwemazuva mashoma uye anogara akabatikana zvikuru. Ukamukanda kumeso kwake panogona kunge paine kunetsana kana kuti haana hanya nezviri kuitika.
Zvirongwa zveramangwana zviri kupera
Zvirongwa zveramangwana izvo zvakagoverwa vakanganwa. Kana pasisina kutaura nezvekugara pamwe chete, kana pasisina kutaura nezvevana venguva yemberi uye kunyange yekugovana mamwe mabasa, imhaka yekuti hukama huri kutonhora. Uyezve, kana ukaedza kutaura nezvazvo angatotsamwa zvotokuodza mwoyo.
Pane zvirevo zvakawanda zvinogona kutungamirira kuhukama huri kupera. Sezvatakatsanangura kare, kufarira ndiko kuripo munhevedzano yezviitiko izvi. Sample inozviita zvese uye zvechokwadi haigone kuvanzwa mumativi ese. Kupfuura zvose, unofanira zvitarisire iwe pachako, kana zvichikuita kuti unzwe wakashata uye panzvimbo pekusakosha, imhaka yekuti munhu iyeye haakukoshesi nerudo.
Pakati pekufarira uye zvakanaka, zvingava zvekubvunza kuti zuva rako rakafamba sei, kuvimba newe kune chero sarudzo, kuratidza chido ichocho chekukuona chero nguva uye kunyange kusimudzira pfungwa dzako mumhinduro dzisina kunaka kana dzakanaka, asi nguva dzose. kuita kukura rudo nerutsigiro. Kana aya makuru manyuko akakundikana, saka imhaka yekuti haatombokudi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Kuchengetwa kwega » Kana murume asingakude anoita sei?
Chii chinokochekera murume kubva kumukadzi